Ithlọ nzukọ ikpeazụ na-arụ ọrụ n'isi obodo Lithuanian mechiri mgbe egwu ndị neo-Nazis
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ihe Ndị Ruuru Mmadụ » Ithlọ nzukọ ikpeazụ na-arụ ọrụ n'isi obodo Lithuanian mechiri mgbe egwu ndị neo-Nazis
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ Lithuania • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Mgbe ị natachara ọtụtụ egwu, LithuaniaObodo ndị Juu ekpebiela ịgbachi kpamkpam ụlọ nzukọ na-arụ ọrụ na isi obodo Vilnius. Nke a na-abịa n’etiti arụmụka ọha na eze kpụ ọkụ n’ọnụ banyere nsọpụrụ obodo nke ndị ọrụ Nazi.
Otu ụlọ ọrụ ndị Juu na ụlọ ụka Choral nke akụkọ ihe mere eme na Vilnius ga-emechi maka "oge a na-agaghị amata," ndị Lithuanian Jewish Community (LJC) kwuru na ozi ha webụsaịtị. Emere mkpebi a mgbe LJC natara “oku ekwentị na akwụkwọ ozi na-eyi egwu na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya.”
Ndị hụrụ mba n'anya na ndị otu aka nri na isi obodo Lithuania nwere oke iwe maka iwepụ ihe ncheta nke ncheta onye na-emekọ ihe ọnụ na Nazi n'ọnụ ụzọ nke Lithuanian Academy of Sciences. N’otu aka ahụ, obodo Vilnius n’izu ụka gara aga gụrụ okporo ụzọ a gụrụ aha otu onye nnọchi anya agha na onye otu Hitler.
Ndị Juu Lithuania toro mkpebi ndị ahụ dịka ogologo oge - ebe ndị hụrụ mba n'anya egwu na ngagharị iwe nke mba niile na nzaghachi.